musha nyika dzakabatana Singers Roddy Ricch Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Roddy Ricch Biography inoratidzira Chokwadi pane yake Yehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Musikana / Wife kuva, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu Hwega. Iyi inyaya yezviitiko zvine mukurumbira kubva paakange ari mwana kusvika paakatanga kuzivikanwa.
Hupenyu nekusimuka kwaRoddy Ricch. Mifananidzo kiredhiti: Pinterest, Youtube, Billboard, uye Rap-up.
Hongu, munhu wese anoziva nezvekutamba kwake kwakakurumbira, "Wife Mudiki" iyo yakaenda kuhutachiona pamapuratifomu akati wandei. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezvaRoddy Ricch's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Roddy Rich Nyaya Yemwana:
Roddy Ricch Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi. Img: Pinterest
Kutanga zita rake chairo ndi “Rodrick Wayne Moore Jr."Uye"Roddy Rich”Rinongova zita remadunhurirwa. Rapper weAmerica akazvarwa pazuva re22nd yaGumiguru 1998 kuvabereki vake muCompton California. Roddy aive mumwe wevana vakawanda vakazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake vechitendero nababa.
Kutanga, nyaya yaRoddy Ricch yehudiki haina kujairika- zvainge zvakaita pamberi pehondo izere nemhando dzakasiyana dzemhirizhonga isingatarisirwe. Pakutanga, akazobatana neCrip gang inotungamira mukubatanidzwa kwake mumhando dzakasiyana dzematambudziko.
Kuomarara kwekubatikana kwake muhupenyu hwemumugwagwa kwakabuda mukutonga uye vabereki vaRoddy Ricch vakaita nekumudzinga pamba pavo pazera diki re15. Ronda kubva munguva yake yapfuura rinogona kunge rave chikonzero chaicho nei achiwanzotaura nezvevabereki vake.
Pashure pazvo, akapedza makore mazhinji ehuduku hwake achifamba kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe nemhuri yake. Kufamba kwekufamba kwakamisikidzwa nevabereki vake paakanga achiri mudiki kwakazotevedzera maitiro emimhanzi yake, makore mazhinji gare gare.
Rapper wekuAmerica akazvarwa kuvabereki vanobva kwepakati mhuri yemhuri uye mumwe ainamata zvakanyanya. Vese baba naamai vakakwanisa kumupa zvese zvese zvakakosha zvaakuda semukomana mudiki.
Kunyanya zvakadaro, vabereki vaRoddy Ricch ndeve Africa American dzinza rakabva kuAtlanta, Georgia. Ruvara rweganda rweiye murapi murapi unoenderana nekwakabva mhuri uye dzinza, iro rinofungidzirwa kuti rakabva kuAfrica.
Kukura paakaberekerwa, Roddy Ricch akange aine flair yemumhanzi uye akatanga kukwikwidza aine makore 8. Kare ikako, Roddy haana kutora mimhanzi zvakakomba uye aingozonyora mashoma akati wandei panguva yake yekuzorora. Kutenda kwake kungoita mumhanzi semufaro wakawedzera paakarova mugwagwa mushure mekunge araswa kunze kwemusha wake.
Akatora mimhanzi zvakakomba paakasiya jeri achiri mudiki. Mufananidzo: Youtube
Pakupedzisira, Rue akabatwa naye uye akaiswa kuseri kwemavara kwemavhiki maviri. Kupedza imwe nguva mutirongo kwakapinza pfungwa dzake dzakamuwandira mimhanzi ipapo ikaburitsa hunhu hutsva munaRoddy. Aida kuti nyika inzwe nyaya yake uye akashandisa mimhanzi svikiro pakupfuuridzira nyaya yake kupasi, nekudaro genesis yekumhanzi wake wakabuda.
Sezvakangoita vamwe vakawanda vakakurumbira vemuzana rino ramakore re21, dzidzo yakaita basa rakakosha mukuendesa Roddy Ricch mupasi rekushambadzira. Kutanga, akanyoreswa kudzidza kuCarson Senior High School mushure maizvozvo ndokuenderera mberi nekufunda kuWestchester Enriched Sayenzi Magnet.
Roddy Ricch ndeye alumnus yeWestchester Yakagadziriswa Sayenzi Magnet. Mufananidzo wechikwereti: Wikimapia.
Paaive muChikoro chepamusoro, Roody akashamiswa nekuita kwaSpanish Knockers, iye South Carolina rapper uyo akafa pazera ramakore 19. Akave fanika yakasimba yaSpika Knockerz uye saka akatsvaga kubudirira mune mimhanzi. Chivimbo chake chakawedzera kujeka sezvo aive nerombo rekuti asangane naKnockerz asati afa.
Basa Rokutanga Upenyu:
Kusangana kwaRoddy naKnockerz kwakasiya chimiro chisingaperi paari. Musangano wehumwari uyu wakakonzera kutengwa kwemidziyo yakawanda yekurekodha pamwe nekumisikidza nzvimbo yakanaka ye studio yake. Panguva iyo Roddy anga aine makore gumi nematanhatu ekuberekwa, anga atotanga kugadzira marimba akanaka nekudaro achiunganidza zviitiko mumatunhu ekumadokero nekumaodzanyemba mimhanzi
Tarisa uone Mutauri Knockers, mukurusa kukurudzira kwaRoddy yekutanga mimhanzi basa. Kwayaka: yekupedzisira fm
Kubva ku studio yake, Roddy akaburitsa rwiyo rwake rwekutanga rwakakurumbira rwainzi "Ricch Nigga" paakanga achiri kuyaruka.
Nzira yekuFame Biography Nyaya:
Asati asangana nemubatsiri wake, pfungwa dzekusiya mimhanzi dzakayambuka pfungwa dzake kakawanda. Roddy Ricch haana kumbobvira afungidzira kuti aizozvikudza muindasitiri yemimhanzi. Matambudziko ake aive akanyanya kuremerwa kutakura ega. Kutanga, aifanira kusangana masikati nousiku kuti atsvage mari.
Kechipiri, aifanirwa kugovera yakatarwa nguva kune yega yega maitiro ake kuti awane chiyero pakati peyemimhanzi purogiramu uye mamwe mabasa. Zvinowanzotaurwa kuti "tsika dzekare dzinofa zvakaomarara, kana ukasadzikaka, dzinokukaka. ” Saizvozvo zvakare, Roddy aisakwanisa kurega zvachose kufamba kwemigwagwa. Akakurumidza kutora zororo rakakura kubva kumimhanzi, achidzokera mumigwagwa.
Mukuda kupona kubva mumigwagwa, Roddy akaramba akazvikurudzira kuti arege kusiya zvaakatenda sezvo kushanda kwake nesimba kuchizobhadhara. Ehe, zvakaitika!
Kukwira Kumukurumbira Biography Nyaya:
Roddy Ricch akadzokera kumimhanzi zvakare mugore ra 2017 aine kuvimba kwakazara kwekupa yega yega yebasa rakaoma mukugadzirwa kwake. Achityisa sezvingaite senge zvinoita, basa rake rakaoma rakatanga kubereka zvigadziriso nekukurumidza kuburitswa kwemessape yake yekutanga "Fudza Tha Migwagwa" iyo yakaratidza nziyo dzakadai 'Chase Tha Bag,' 'Hoodricch,' uye 'Fucc It Up'.
Zvakare, rake ra2018 track “Ufe Uchiduku” iyo yaakaburitsa muna Chikunguru yakava imwe yeanobudirira kuimba. Roddy Ricch akakurumbira nekuda kweiyi track.
Iyo album yakavharidzirwa yemumhanzi wake wakakurumbira 'Kufa Wechidiki'. Mufananidzo: Amazon
Kurumidza mberi kunguva yekunyora Roddy Ricch's biography, rapper - senge Post Malone - ikozvino yave imwe yeanonyanya kuzivikanwa uye echidiki mimhanzi prodigies muAmerica.
Wechidiki uyu akapfeka imwe yakasarudzika yekukweva kubva paakakwira mukurumbira. Kuita kwake kwakatanhamara kwakamuwanisa iye 2020 Grammy Awards kusarudzwa kwe Best Rap Song pamwe ne Best Rap / Sung Performance. Akahwina zvakare 2020 Grammy Tuzo dzeMhando yepamusoro Rap Performance.
Kune murume wedu pa2020 Grammy Mubairo. Mufananidzo wechikwereti: Zimbio.
Vamwe vese, sekutaura kwatinoita kazhinji, yave nhoroondo.
Roddy Ricch's Musikana-Kudanana, Akaroora kana Akaroora?
Pave paine kuwedzerwa kubvunzwa nezve hupenyu hwehukama hwemurapi kubvira paakakwira mukurumbira. Mushure mekutsvakisisa, tasvika pamhedziso yekuti Roddy Ricch haana kuroora panguva yekunyora kwake biography.
Kunyangwe hazvo Roddy akambove murudo nemusikana wake wekare, Allie Kay. Nyaya yavo yerudo inogona kunge yakapera zvichitevera kusanzwisisana kwakaitika pakati pavo muna2019.
Akanakisa! Handizvo here? Kuona kwekupenya kweye waimbova musikana waRoddy, Allie Kay. Ipa: Pinterest
Chii Chakakonzera Kurambana kwaRoddy Ricch?:
Mwaka wekupedzisira wegumi (2019) raive gore risingafadzi rehukama hwaRoddy naAllie. Gore iro, rapper akapomerwa mhosva yemhirizhonga mudzimba, chiitiko chakatungamira mukusungwa kwake muna Nyamavhuvhu (2019).
Akawedzerwa bhuku "felony" uye akaburitswa pachibatiso chemadhora zviuru makumi mashanu munaNdira 50,000. Nharo dzakakonzera mhirizhonga dzakaitika mumba make muLos Angeles apo Roddy anonzi akaisa maoko ake pamusikana wake akamubata pakati pekurohwa.
Waizviziva here?… Musikana waRoddy Ricch, Allie Kay aive nemwedzi miviri akazvitakura panguva yechiitiko ichi nemukomana wake.
Mhuri yaRoddy Ricch Upenyu:
Iwe neni tinoziva murapi wemuAmerica anga achirambidzwa nevabereki vake kubvira makore gumi nemashanu. Akakurira mumigwagwa uye akashanda nzira yake mukurumbira pamwe nevabereki kana nhengo dzemhuri kuti vapemberere naye. Zvakangodaro, chikamu ichi chinokanda mwenje wakawanda kunhengo dzemhuri dzerapper.
Nezve Baba naamai vaRoddy Ricch:
Amai nababa vaRoddy Ricch ndivo vakanyanya kutaurwa nezvayo nemusikana wechidiki nekuda kwehukama husina hukama hwaivepo pakati pavo panguva yaakadzingwa pamba pemhuri.
Chokwadi chakaratidza ndechekuti vabereki vake vainamata zvakanyanya uye vaifamba nenzvimbo dzese vachidudzira mwana wavo nzvimbo dzakasiyana apo aive mukomana mudiki.
Nezve ambuya vaRoddy Ricch:
Chokutanga uye chinonyanya kukosha, ndiye mumwe wehama dzisingakanganwiki dzaRoddy. Ambuya vaRapper avo vanogara muLouisiana vaive nebasa rekutora Roddy pamwe naamai vake kumachechi emuno muLouisana. Ichi chiito chakasimudzira rudo rwake rwekutanga kumimhanzi apo aiteerera nziyo dzekwaya yechechi.
About Roddy Ricch's Vanun'una nehama:
Chiyero chaRoddy Ricch chakazvivharira kubva kumhuri yake chakaita ruzivo pamusoro pehama dzake nehanzvadzi zvakaoma kuwana. Moreso, hapana ruzivo rwunozivikanwa nezve babamunini vaRoddy Ricch nasekuru pamwe nababamunini vake nababamunini.
Kunyanya zvakadaro, tichitarisa mumadzitateguru emurapi, hapana ruzivo rwuchiri kuwanika pamusoro pasekuru nasekuru vake pamwe nasekuru vake amai nasekuru naamai vake.
Roddy Ricch ndiani uye Chii chinoita kuti afare?… Gara kumashure apo isu tichikupa iwe ruzivo nezve hupenyu hwega hweiye mudiki muAmerican rapper kunze kwemugwagwa wake uye kumuka kune mukurumbira biography chokwadi. Kutanga, Roddy Ricch's persona isanganiswa yeRibra zodiac maitiro.
Kunyangwe achizivikanwa kuve rapper, Roddy zvakare ari basketbasket uye anofarira basketball fan pane imwe nguva muhupenyu hwake. Akambotamba mutambo uyu kusekondari asi aifanira kurega nekuda kwekureba. Kutaura nezve fanhip, Roddy anonyanya fan fan LeBron James (kwete Rudy Gobert. Paaitaura nezve mitambo yake yepamusoro yechikoro chebhasiketi uye zvekuseredza, akati;
Hongu! Iye anoda basketball uye anotamba mushe mumutambo futi. Mufananidzo wechikwereti: Complex.
“Aimbove saMichael Jordan kuchikoro chesekondari, hapana kapu.
Ini ndaive murindi wepfungwa, zvakanyanya senge Allen Iverson mhando, ini handisi kuzonyepa. Joridhani yaive dunking mhando yei ** ga. "Ini ndaive ndakafanana nemuchinjikwa-uyu ** ga-up, ndichityora-makumbo ake mamiriro."
Kubudirira kwaRoddy Ricch mune yemimhanzi nyika kwakamuwanisa mari inofungidzirwa inosvika madhora makumi mana nemakumi mana emadhora panguva ino yekuisa iyi biography. Kwakatangira hupfumi hwake kunonyanya kubva pakuedza kwake kwemimhanzi.
Akagadzira chaiyo toni yemubatsiro kubva kunzira yake - “Bhokisi” iyo yakatarwa kwete. 1 paBillboard. Kuongorora maitiro ake ekushandisa mari kunoratidza kuti anogara mararamiro anoshamisa.
Nekuda kwechimiro chake chakachengetedzeka, Roddy anonamira pakuburitsa zvinhu zvake pamapuratifomu enhau. Iye achiri kuzoratidzira imba yake iyo vateveri vazhinji vari kutarisira kuve yakasimba uye inodhura.
Uyezve, Akave akaonekwa panguva dzinoverengeka achikumbira nemhando dzakasiyana dzemota dzekunze. Pazasi pane mufananidzo weimwe yemota yaRoddy Ricch- yake nhema Royce Rolls.
Mota yake inomukodzera zvakakwana. Mufananidzo: Pinterest.
Kuputira zvedu Roddy Ricch nyaya yehudiki uye Biography, heano zvimwe zvisinganyatso-kuzivikanwa chokwadi nezve izvo zvichakubatsira iwe kuti utore mufananidzo wakazara weiyo bio.
Chokwadi # 1: Ruvara rwemeso:
Roddy Ricch ane chaiyo yakasarudzika uye yakasarudzika ruvara rwemeso. Meso ake mabhora ari akapepuka brown uye anowanzotsanangurwa kuve emerald-uye-acorn-ruvara. Tarisa uone maziso ake akasiyana neake anomusarudzira kubva pakuonekwa kwevaimbi vakawanda.
Ruvara rwemaziso ake rwakanyanya kuita kuona. Mufananidzo wechikwereti: Musoro wenyaya.
Chokwadi # 2: Chitendero chake:
Vabereki vaRoddy Ricch vakamuita muKristu kubva pazuva chairo rekuzvarwa kwake. Kuzvarwa mumusha wechiKristu unonamata zvakanyanya, akatora zviitiko zvechechi zvakanyanya uye akabhabhatidzwa aine makore manomwe.
Zvingangove gore mushure mekubhabhatidzwa, akava nerombo sangana Kendrick Lamar aipinda kereke imwe chete naye panguva yehudiki hwake.
Chokwadi # 3: Matipi:
Roddy Ricch akaisa akati wandei ma tattoo mumuviri wake. Akarongedza vamwe vakaroora vematato pabendekete rake reruboshwe. Zvikuru, akatora zita rake rezita "Roddy Ricch”Nemamwe matiresi akati wandei kusanganisa neRoll-Royce inki paruoko rwake. Uyezve, Ricch akarongedza izwi rekuti "prolific" pachiso chake.
Kuratidzwa kwemamwe matatino akanyorwa neiye mudiki, Roddy Ricch
Zita Chairo: Rodrick Wayne Moore Jr.
Zita rekudanwa: Roddy Ricch.
Zuva rekuzvarwa: Gunyana 22, 1998.
Nzvimbo yekuzvarirwa: Compton, California, US
kukwirira: 5feet 7inches (171 cm).
Networth: US $ 1 Million.
Basa: Rapper, Singer uye Songwriter.
Labels: Atlantic Shiri - Chiono Varaidzo.
Dzidzo: Carson Senior High Chikoro uye Westchester Yakapfumiswa Sayenzi Magne.
Roddy Ricch wiki.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading nyaya yedu uye anogara achititsigira mukati zvatinoita uye zvatiri. Paudiki-Biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!